Компания «Мелагро» за прошлый год поставила в Европу 5,5 тысяч тонн картофеля — Картофельная Система
Sawirka adeegga saxaafadda ee AVO
30-kii Luulyo, ku-xigeenka koowaad ee Gobolka Vladimir Alexander Remiga oo ay weheliyaan Agaasimaha Waaxda Beeraha ee Gobolka Vladimir Konstantin Demidov ayaa safar shaqo ku tagay Degmadda Melenkovsky, halkaas oo laga soo saaro baradho iyo khudradda badan ee gobolka. Hoggaamiyayaashu waxay booqdeen 4 urur oo warshadaha beeraha ah: OOO Melagro, Plemzavod Ilkino, SEC Dmitrievy Gory iyo melenkovsky cannery. Wadarta guud ee macaashka sanadlaha ah ee shirkadahani waxay kor u dhaaftay 380 milyan rubles.
LLC "Melagro" ayaa ahaa kii ugu horreeyay ee soo dhoweeya martida. Shirkaddu waa mid ka mid ah kuwa ugu horreeya soosaarayaasha hilibka baradho. Aagga wax lagu beero waa 750-830 hektar sanadkiiba, isku darka barandhada wuxuu gaarayaa 25-27 kun oo tan. Labadii sano ee la soo dhaafay, soosaarayaashu waxay hoggaamiyeyaal u noqdeen dhoofinta alaabada beeraha.
"Sannadkii hore, Melagro wuxuu Yurub gaarsiiyay 5,5 kun oo tan oo baradho ah. Tilmaamahan ayaa muujinaya in mugga badeecaduhu ay sii kordhayaan sanad walba. Tiknoolajiyadda casriga ah ayaa la soo bandhigay oo loo adeegsadaa wax soo saarka, taas oo noo oggolaaneysa inaan soo saarno alaab tayo leh. Qeybtii hore ee 2020, shirkadda waxaa laga siiyay taageero maaliyadeed: barnaamijka gobolka, 2,2 milyan rubles ayaa loo qoondeeyay miisaaniyadda dowladda, ”ayuu carabka ku adkeeyay Alexander Remiga.
In ka badan 1 milyan oo rubles ayaa loo qoondeeyay miisaaniyada dowladda dhexe iyo tan gobolka si loo taageero shirkadaha wax soosaarka warshadaha ee degmada Melenkovsky qeybtii koowaad ee sanadka 2020. Labadii sano ee la soo dhaafay, dhismayaasha qallajinta sare ee hadhuudhka oo heer sare ah ayaa laga dhisay dhulka dhirta Ilmahao ee taranka iyo Dmitrievy Gory SPK. Tani waxay suurtogelisay in la kordhiyo wax soo saarka iyo badbaadada dalagyada hadhuudhka.
Dhamaan afarta shirkadood ee aan maanta booqanay waxay si firfircoon ugu lug leeyihiin barnaamijyada gobolka ee loogu talagalay horumarinta dhismaha warshadaha, waxay helaan kabitaanno iyo taageero, ”ayuu yidhi Konstantin Demidov.
Sida uu xusay Alexander Remiga, maamul goboleedyadu waxay wajahayaan howsha kordhinta dhoofinta wax soo saarka beeraha ee gobolka in ka badan $ 2024 milyan marka la gaaro 313. Mashruuca "Dhoofinta alaabada beeraha ee gobolka Vladimir" ayaa durba muujineysa firfircooni wanaagsan.
"Hadda waxaa muhiim ah in la hubiyo ka-qaybgal dheeraad ah ee warshadaha beero-warshadaha ee gobolka Vladimir ee barnaamijyada federaalka ah, loo diyaariyo dhammaan dukumiintiyada loo baahan yahay oo loo gudbiyo codsiyada sanadka 2021 si ku habboon," ayuu guddoomiye ku-xigeenka koowaad carrabka ku adkeeyay.
Source: Maamulka gobolka Vladimir
Tags: Vladimir Regionbaradho korayaDhoofinta baradhada